PressReader - Eyethu Baywatch: 2018-09-26 - Ba­fundiswe ngemikhiqizo yezinkukhu
Ba­fundiswe ngemikhiqizo yezinkukhu
Eyethu Baywatch - 2018-09-26 - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu
INTSHA yaseNg­welezana namapheth­elo ivulwe amehlo, ngomkhakha we­zolimo, yat­shelwa ukuthi ezolimo azigcini nje kuphela ngez­into ezithinta umh­la­bathi, kodwa kuningi okunye en­gak­wenza. Okunye kwakho wuh­lelo lwemikhiqizo yenyama yenkukhu noku­fuywa kwayo. Obe­qhamuka eMnyang­weni We­zolimo, es­i­fun­dazweni uNksz. Hlengiwe Ngubane, ephelezelwa nguNkk.
Khany­isile Mtha­bela, ophethe ehho­visi lezolimo eMh­lathuze, be­behlangan­ise intsha engaba­fuyi bezinkukhu, be­zoy­i­co­belelisa ngol­wazi.
‘Ku­fanele sikuqonde ukuthi inkukhu akuy­ona eyoku­fuyelwa ukuthi uyi­dayise kuphela, kodwa miningi eminye imikhiqizo on­gayenza useben­zisa in­yama yenkukhu futhi nen­gagcina isikhulisa ib­hizin­isi.
‘Njengoba isimo se­zom­notho sin­ge­sihle ezweni lakithi, ku­fanele sin­galin­deli kakhulu uhu­lu­meni ukuthi asivulele am­ath­uba, kodwa kuhle athi es­i­siza sibe sinakho okun­cane nathi, es­ethem­bele kukhona.
‘Uma sin­gathi inkukhu siy­i­fuyela uku­day­isa kuphela, lokho kusho ukuthi uma zin­ga­th­engwa sin­gagcina sesi­lahlekelwa imali esiyiseben­zisile sizilanda, futhi siphinde siz­ifuye.
‘Ugcine ngelokuthi maningi am­ath­uba an­gavela uma lem­boni ikhula, ngoba singabona kwanda os­omab­hizin­isi kuphinde ku­vuleke na­math­uba emisebenzi.
Ongumh­leli walomb­hid­lango uMnuz Moses Ngob­ese, ubonge bonke abebey­ingx­enye yaloluh­lelo, waphinde wagqugquzela ukuthi aluqon­dene nal­abo aba­fuye izinkukhu kuphela, kodwa na­ban­ge­nazo nabo ba­mukelek­ile ukuze babenol­wazi abayo­gcina se­beluseben­zisa ukuz­iqalela awabo am­ab­hizin­isi.Ubonge kakhulu intsha yaku­len­dawo, ngokungabi namahloni oku­son­dela ngapham­bili uma ibizwa, futhi iphinde ibam­bisane ekuz­iza­me­leni iz­into eziy­isa pham­bili.
Youth trained on poul­try farm­ing
Enye yentsha yaseNg­welezana engaba­fuyi bezinkukhu ebiy­ingx­enye yalom­cimbi obuqhubeka en­holo lom­phakathi ku­len­dawo